Mmadụ iri merụrụ ahụ n'ọgba aghara na ụgbọ oloko Tokyo
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Mmadụ iri merụrụ ahụ n'ọgba aghara na ụgbọ oloko Tokyo
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Rail njem • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ihe merenụ kpatara nnukwu ọgba aghara n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Odakyu, na -akwụsịtụ ọrụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè abụọ metụtara.
Otu nwoke ji mma wee na -aga n'ihu n'ọdụ ụgbọ oloko Tokyo.
Mwakpo a mere na ọdụ Odakyu Electric Railway na mbubreyo Fraịde.
Otu onye n'ime ndị ahụ merụrụ ahụ nke ukwuu merụrụ ahụ mgbe a tụrụ ya ọtụtụ oge.
Otu nwoke nọ n'ụlọ mkpọrọ ndị uwe ojii n'abalị a mgbe ọ gafesịrị ogbunigwe na -ada na Tokyo Odakyu Electric Railway line ụgbọ okporo ígwè.
Dịkarịa ala, mmadụ iri merụrụ ahụ na mwakpo ahụ mere na mgbede Fraịde n'ime TokyoMpaghara mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke Setagaya.
Mmadụ iri merụrụ ahụ na ogbunigwe dara na ụgbọ oloko Tokyo
Ọ bụ ezie na akụkọ mbụ gosiri na mmadụ anọ merụrụ ahụ na mwakpo ahụ, ọnụ ọgụgụ ahụ mechara rịa elu ruo mmadụ iri, dịka ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara si kwuo ngalaba mgbanyụ ọkụ Setagaya.
Ngalaba na -ahụ maka ọkụ na Tokyo kwuru na a kpọgara mmadụ itoolu n'ime ndị njem iri merụrụ ahụ n'ụlọ ọgwụ dị nso, ebe onye nke iri nwere ike pụọ. Ndị niile merụrụ ahụ maara ihe, ndị ọrụ ngalaba mgbanyụ ọkụ kwuru.
Otu onye n'ime ndị ahụ merụrụ ahụ nke ukwuu merụrụ ahụ nke ukwuu mgbe a tụrụ ya ọtụtụ oge, ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara kwuru na -ehota isi mmalite ndị uwe ojii.
Ozugbo ihe ahụ mechara, ụgbọ oloko ahụ kwụsịrị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè abụọ, na -ekwu na onye a na -enyo enyo wụliri ma gbapụ n'ụkwụ. Achọpụtabeghị onye butere ngwa ngwa ụgbọ oloko ahụ.
Onye a na -enyo enyo gbapụrụ n'ụgbọ okporo ígwè, hapụ mma ya na ekwentị mkpanaka ya.
Ihe merenụ kpalitere ịchụ nta, yana nwoke nwoke na -enyo enyo, n'ime afọ iri abụọ, ndị uwe ojii jidere ya n'ikpeazụ mgbe ọ tụgharịrị onwe ya n'ụlọ ahịa dị mma, na -agwa onye njikwa na ọ bụ ya mere mwakpo ahụ. Amabeghị ihe kpatara mwakpo a.
Mpụ ime ihe ike dị ụkọ na Japan, mwakpo ahụ na -abịa na isi obodo na nche nchebe ka ọ na -akwado asọmpi Olympic.